dadkii ku dhaawacmay Shil ka dhacay Degaanka Xaawa Cabdi oo Isbitaalka Madiina la geeyay – Radio Muqdisho
dadkii ku dhaawacmay Shil ka dhacay Degaanka Xaawa Cabdi oo Isbitaalka Madiina la geeyay
Shan ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho maanta barqadii markii ay isku dhaceen labo gaari oo midkood uu ahaa Nuuca iska rogaha Soomaalidu ay u taqaano halka kan kale uu ahaa Gaari homy ah ama Caasi siday dad rakaab ah.
Dadka ku dhaqan Degaanka Xaawa Cabdi ayaa u gurmaday Dadkaas shilka dhibaatadu ka soo gaartay dadkii dhaawacmay oo 9 Ruux ah ayaana loo soo qaaday Magaalada Muqdisho iyadoo la dhigay Isbitaalka Madiina dhaawacyadaas Halkaas oo ay Xaaladooda kula tacaalayaan Dhaqaatiirta Dadkuna waxaa ay dhaawacyadoodu u badanyihiinbaa laleeyahay kuwa jajab ah.
“Labada gaari markii ay ku dhaceen gaariga xamuulka ah waxaa uu ku dul-dhacay gaarigii ay la socdeen rakaabka oo ahaa Mini-Bus-ka, waxaan arkay maydadka 5 qof iyo dhaaawaca toban kale oo dhammaantood ah dadkii la socday gaariga caasiga ah ee dadweynaha,” ayuu yiri goob jooge ku sugnaa goobta shilku ka dhacay.
Shilalka noocan oo kale ah ayaa inta badan kusoo noqnoqda waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye, waxaana sababta ugu weyn lagu sheegaa Wadada oo meelaha qaar bur bur lixaadleh uu soo gaaray iyo wadayaasha gaadiidka oo Xowli sare ku socda Maamulka lafoole ayaana uga digay wadayaasha Gaadiidka in xawaare sare ay ku wadaan Gaadiidka Marka ay marayaan wadadaas.
“Sawirro”Shir looga hadlay maamul u sameynta gobollada dhexe oo Muqdisho ka dhacay